ताजा अपडेट : गगन र विश्वप्रकाशबीच कडा प्रतिस्पर्धा, कसले मार्ला बाजी ? - ramechhapkhabar.com
ताजा अपडेट : गगन र विश्वप्रकाशबीच कडा प्रतिस्पर्धा, कसले मार्ला बाजी ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा बिहिबार भएको महामन्त्रीको सुरुवाती मतगणनामा गगन थापाले अग्रता लिइरहेका छन्। हालसम्म १२०० मत गणना हुँदा गगन कुमार थापा ७५६,विश्वप्रकाश शर्मा ४९०,प्रकाशशरण महत ३८९,प्रदीप पौडेल ३६९,मिनेन्द्र रिजाल २२३ मत प्राप्त गरेका छन्।
गगन हराएर प्रदीप जिताउने मिसनमा सफल होलान् कृष्ण सिटौला ?
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । बिहीबार बिहान १० बजेदेखि मतगणना प्रारम्भ गरिएको हो । मतगणनाका लागि मतपेटिकाबाट मत खसाइएको र केही समयभित्रै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
कांग्रेसको दुई महामन्त्रीका लागि ६ जना उम्मेदवार छन् । जसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा.प्रकाशशरण महत, डा.मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल र डा.राजाराम कार्की छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल छन् । पौडेल सिटौला समूहबाट हुन् । शेखर कोइराला समूहबाट गगन थापा र मीनेन्द्र रिजाल मैदानमा छन् ।
यस्तै प्रकाशमान सिंह समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मा र विमलेन्द्र निधि समूहबाट राजाराम कार्की महामन्त्रीको उम्मेदवार छन् । शर्मा संस्थापनकाे काेटामा नपरेपछि सिंहको प्यानलबाट उठेका हुन् । देउवाले सहमहामन्त्रीमा उठ्न गरेकाे प्रस्ताव नमानेका उनी शेखरकाे प्यानलबाट महामन्त्री ल’ड्ने चर्चा पनि चलेकाे थियाे । तर मीनेन्द्र रिजालले ठाउँ खाली नगरेपछि उनी सिंहकाे प्यानलबाट उठेका हुन् ।
यसअघि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा र उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का तथा धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । उपसभापतिमा संस्थापनका पुराना नेता विजय गच्छदार मात्र २ मतले हारेपछि अब महामन्त्रीको नतिजा कस्तो आउला भन्ने कौतुहल बढेको छ ।